लौ आयो माओवादी केन्द्रको अन्तिम सूची, को कहाँबाट ? - Everest Dainik - News from Nepal
लौ आयो माओवादी केन्द्रको अन्तिम सूची, को कहाँबाट ?
नेकपा माओवादीले उम्मेदवारको अन्तिम सूचि सार्वजनिक गरेको छ ।
माओवादी र एमालेबीच भएको तालमेल अनुसार निम्न अनुसारका निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीका उम्मेदवारले निर्वाचन लडने भएका छन ।
कतिपय जिल्लामा विवादका बीच माओवादी केंद्रले सूचि सार्वजनिक गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस शीर्ष नेताहरू को कहाँबाट उम्मेदवार ?
याे पनि पढ्नुस यी हुन प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि एमाले उम्मेदवारहरू
ट्याग्स: Election 2074